စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့အတွက် ဒီစံချိန်တွေကုို မက်ဆီ ချိုးဖြတ်ရပါဦးမယ်
12 Oct 2018 . 9:26 PM
မက်ဆီ Messi နဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာက ဒီနေ့ခေတ်ဘောလုံးလောကမှ Debate အဖြစ်ဆုံး ကစားသမားနှစ်ဦးပါပဲ။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာလည်း ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရှိနေပြီး ဘယ်သူပိုကောင်းလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းအဖြေကို ရှာရင်းနဲ့ နှစ်ဖက်ပရိသတ်တွေ အချင်းချင်း တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေဆဲပါပဲ။ မက်ဆီ တင်ထားတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို စီရော်နယ်လ်ဒို ချိုးဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေသလို မက်ဆီ ချိုးဖြတ်ပြရမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ အခုလောလောဆယ် မက်ဆီ ကျော်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးပမ်းရမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကို ဦးဆုံးဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
၁. ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်
မက်ဆီအတွက် ပထမဦးစားပေး ကြိုးပမ်းရမှာက ချန်ပီယံလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားစာရင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ရေးပါပဲ။ အခုလောလောဆယ် စီရော်နယ်လ်ဒိုက ချန်ပီယံလိဂ်မှာ (၁၂၀)ဂိုး သွင်းယူထားတဲ့အပြင် တစ်ရာသီအတွင်း သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီက (၁၇)ဂိုးသွင်းပြီး စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ မက်ဆီရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးက (၁၀၅)ဂိုးရှိနေပြီဖြစ်လို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အချိန်ယူရဦးမှာပါ။
၂.(၆)ရာသီဆက် ပြိုင်ပွဲစုံ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ စံချိန်
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်အသင်းကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီနောက်ပိုင်းကတည်းက (၆)ရာသီဆက်တိုက် ပြိုင်ပွဲစုံမှာ တစ်ရာသီကို ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တယ်။ မက်ဆီဟာ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တာက ၂၀၁၀-၁၁ ၊ ၂၀၁၁-၁၂ ၊ ၂၀၁၂-၁၃ (၃)ရာသီဆက်သာ ရှိခဲ့တယ်။ လက်ရှိအနေအထားအရ မက်ဆီအနေနဲ့ ဒီစံချိန်ကို ဖြတ်ကျော်ဖို့က နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲနေပါတယ်။
၃. နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးနဲ့ ဆုဖလား
မက်ဆီထက် စီရော်နယ်လ်ဒို ခေါင်းတစ်လုံးသာနေတာက နိုင်ငံအသင်းအတွက် ဆုဖလားရရှိမှုပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ယူရို-၂၀၁၆ မှာ ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီး မက်ဆီကတော့ အခုအချိန်အထိ နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ ဘာဆုဖလားမှ မရသေးပါဘူး။ သွင်းဂိုးအရေအတွက်ကို ကြည့်ရင်လည်း စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် (၈၅)ဂိုးအထိ သွင်းထားပြီး မက်ဆီကတော့ (၆၅)ဂိုးသာ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါတွေကတော့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ မက်ဆီ လိုအပ်နေတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက အသက်အရွယ်ရလာပေမယ့်လည်း ခြေစွမ်းက မကျသေးလို့ ဘယ်သူက ဘယ်သူ့ကို နှာတစ်ဖျားအသာရမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ . .
Photo:Goal.com,Business Insider,CRHoy,The Japan Times,SportsBible
မကျဆီ Messi နဲ့ စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဆိုတာက ဒီနခေ့တျေဘောလုံးလောကမှ Debate အဖွဈဆုံး ကစားသမားနှဈဦးပါပဲ။ နှဈယောကျစလုံးမှာလညျး ပရိသတျအခိုငျအမာ ရှိနပွေီး ဘယျသူပိုကောငျးလဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးအဖွကေို ရှာရငျးနဲ့ နှဈဖကျပရိသတျတှေ အခငျြးခငျြး တိုကျပှဲတှဖွေဈနဆေဲပါပဲ။ မကျဆီ တငျထားတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို စီရျောနယျလျဒို ခြိုးဖွတျဖို့ ကွိုးပမျးနသေလို မကျဆီ ခြိုးဖွတျပွရမယျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျတှလေညျး ရှိနပေါသေးတယျ။ အခုလောလောဆယျ မကျဆီ ကြျောဖွတျဖို့ ကွိုးပမျးရမယျ့ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေို ဦးဆုံးဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
၁. ခနျြပီယံလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျ
မကျဆီအတှကျ ပထမဦးစားပေး ကွိုးပမျးရမှာက ခနျြပီယံလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားစာရငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောဖွတျရေးပါပဲ။ အခုလောလောဆယျ စီရျောနယျလျဒိုက ခနျြပီယံလိဂျမှာ (၁၂၀)ဂိုး သှငျးယူထားတဲ့အပွငျ တဈရာသီအတှငျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ၂၀၁၃-၁၄ ရာသီက (၁၇)ဂိုးသှငျးပွီး စံခြိနျတငျထားပါတယျ။ မကျဆီရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးက (၁၀၅)ဂိုးရှိနပွေီဖွဈလို့ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောဖွတျဖို့ အခြိနျယူရဦးမှာပါ။
၂.(၆)ရာသီဆကျ ပွိုငျပှဲစုံ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ စံခြိနျ
စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျအသငျးကို စတငျရောကျရှိခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီနောကျပိုငျးကတညျးက (၆)ရာသီဆကျတိုကျ ပွိုငျပှဲစုံမှာ တဈရာသီကို ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တယျ။ မကျဆီဟာ ဂိုး(၅၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တာက ၂၀၁၀-၁၁ ၊ ၂၀၁၁-၁၂ ၊ ၂၀၁၂-၁၃ (၃)ရာသီဆကျသာ ရှိခဲ့တယျ။ လကျရှိအနအေထားအရ မကျဆီအနနေဲ့ ဒီစံခြိနျကို ဖွတျကြျောဖို့က နညျးနညျးတော့ ခကျခဲနပေါတယျ။
၃. နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးနဲ့ ဆုဖလား
မကျဆီထကျ စီရျောနယျလျဒို ခေါငျးတဈလုံးသာနတောက နိုငျငံအသငျးအတှကျ ဆုဖလားရရှိမှုပါ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ယူရို-၂၀၁၆ မှာ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့ပွီး မကျဆီကတော့ အခုအခြိနျအထိ နိုငျငံအသငျးနဲ့အတူ ဘာဆုဖလားမှ မရသေးပါဘူး။ သှငျးဂိုးအရအေတှကျကို ကွညျ့ရငျလညျး စီရျောနယျလျဒိုဟာ ပျေါတူဂီအသငျးအတှကျ (၈၅)ဂိုးအထိ သှငျးထားပွီး မကျဆီကတော့ (၆၅)ဂိုးသာ ရှိပါသေးတယျ။
ဒါတှကေတော့ စီရျောနယျလျဒိုကို ကြျောဖွတျဖို့ မကျဆီ လိုအပျနတေဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှဖွေဈပါတယျ။ နှဈယောကျစလုံးက အသကျအရှယျရလာပမေယျ့လညျး ခွစှေမျးက မကသြေးလို့ ဘယျသူက ဘယျသူ့ကို နှာတဈဖြားအသာရမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ . .